22 “Varume, hama+ navanababa, zvino chinzwai kuzvidzivirira+ kwangu kwamuri.” 2 (Naizvozvo, pavakanzwa achitaura navo nomutauro wechiHebheru+ vakatonyanya kunyarara, iye akati:) 3 “Ndiri muJudha,+ akaberekerwa muTaso yeKirikiya,+ asi ndakadzidza muguta rino ndiri pamakumbo aGamarieri,+ ndakarayiridzwa maererano nokusatsaudzira+ kwoMutemo wemadzitateguru, ndichishingairira+ Mwari sezvamuri kuita imi mose nhasi. 4 Ndakatambudza Nzira iyi kusvikira kurufu,+ ndichisunga nokuisa mujeri+ varume nevakadzi, 5 zvandingapupurirwawo nomupristi mukuru neungano yose yevarume vakuru.+ Ndakawanawo tsamba+ kubva kwavari kuti ndiende kuhama dzokuDhamasiko, uye ndakanga ndiri munzira ndichienda kunotora vaya vakanga vari ikoko, kuti ndiuye navo muJerusarema vakasungwa kuti varangwe. 6 “Asi pandakanga ndichienda uye ndava kuda kusvika kuDhamasiko, panenge pamasikati makuru, chiedza chikuru chakangoerekana chandipenyera kumativi ose chichibva kudenga,+ 7 uye ndakawira pasi ndikanzwa inzwi richiti kwandiri, ‘Sauro, Sauro, uri kunditambudzirei?’+ 8 Ndakapindura kuti, ‘Ndimi ani, Ishe?’ Iye akati kwandiri, ‘Ndini Jesu wokuNazareta, wauri kutambudza.’+ 9 Zvino varume vandakanga ndiinavo,+ chokwadi, vakaona chiedza asi havana kunzwisisa inzwi reaitaura neni.+ 10 Ndakati, ‘Ndoitei,+ Ishe?’ Ishe akati kwandiri, ‘Simuka, upinde muDhamasiko, imomo uchaudzwa zvinhu zvose zvawakatemerwa kuti uite.’+ 11 Asi zvandaisagona kuona kana chero chinhu chipi zvacho nokuda kwokubwinya kwechiedza ichocho, ndakasvika kuDhamasiko ndakabatwa ruoko nevaya vandakanga ndiinavo.+ 12 “Zvino Ananiyasi, mumwe murume aitya Mwari maerereno noMutemo, aipupurirwa zvakanaka+ kwazvo nevaJudha vose vaigara imomo, 13 akauya kwandiri uye, amire pedyo neni, akati kwandiri, ‘Sauro, hama, chionazve!’+ Ndakamutarira paawa iyoyo chaiyo. 14 Iye akati, ‘Mwari wemadzitateguru+ edu akusarudza+ kuti usvike pakuziva kuda kwake uye kuti uone+ Iye akarurama+ uye kuti unzwe inzwi romuromo wake,+ 15 nokuti uchava chapupu chake kuvanhu vose chezvinhu zvawaona nokunzwa.+ 16 Zvino uri kunonokerei? Simuka, ubhabhatidzwe,+ ubvise+ zvivi zvako nokudana zita rake.’+ 17 “Asi pandakanga ndadzoka muJerusarema+ uye ndichinyengetera ndiri mutemberi, ndakaita sendabatwa nehope,+ 18 ndikamuona achiti kwandiri, ‘Chimbidza, ukurumidze kubuda muJerusarema, nokuti havazobvumi+ kupupura kwako pamusoro pangu.’ 19 Ndakati, ‘Ishe, ivo vanonyatsoziva kuti ndaiisa mujeri+ nokurova vaya vaikutendai musinagogi rimwe nerimwe;+ 20 uye paiteurwa ropa raStefani+ chapupu chenyu, iniwo ndakanga ndakamira pedyo ndichibvumirana nazvo+ uye ndichirinda nguo dzokunze dzevaya vaimuuraya.’ 21 Asi iye akanditi, ‘Chienda, nokuti ndichakutumira kumamwe marudzi ari kure.’”+ 22 Zvino vakaramba vachimuteerera kusvikira pashoko iri, vakashevedzera, vachiti: “Bvisai munhu akadai panyika, nokuti akanga asina kukodzera kurarama!”+ 23 Zvavakanga vachishevedzera, vachivheyesa nguo dzavo dzokunze, vachimwaya guruva mumhepo,+ 24 mutungamiriri wehondo akarayira kuti iye apinzwe mudzimba dzevarwi, akati aifanira kuongororwa achiita zvokuzvamburwa, kuti anyatsoziva nei vakanga vachimuitira mheremhere+ zvakadai. 25 Asi pavakanga vamutambanudza kuti vamurove, Pauro akati kumukuru weuto akanga akamira ipapo: “Munobvumirwa here nomutemo kuzvambura munhu muRoma+ asi asina kupiwa mhosva?” 26 Nokudaro, mukuru weuto paakanzwa izvi, akaenda kumutungamiriri wehondo akataura, achiti: “Munoda kuitei? Chokwadi munhu uyu muRoma.” 27 Naizvozvo mutungamiriri wehondo akauya, akati kwaari: “Ndiudze, Uri muRoma+ here?” Iye akati: “Hungu.” 28 Mutungamiriri wehondo akabva ati: “Ini ndakatenga kodzero idzodzi dzokuva mugari wemuno nemari zhinji kwazvo.” Pauro akati: “Asi ini ndakatoberekerwa+ madziri.” 29 Naizvozvo, varume vakanga vava kuda kumubvunzisisa vachimutambudza vakabva vabva paari; uye mutungamiriri wehondo akatya paakaziva kuti akanga ari muRoma+ uye kuti akanga amusunga. 30 Naizvozvo, mangwana acho, zvaaida kuziva zvechokwadi kuti nei akanga achipomerwa nevaJudha, akamusunungura, akarayira vapristi vakuru neboka reSanihedrini yose kuti vaungane. Akaburutsa Pauro pasi, akamumisa pakati pavo.+